को हुन गगन थापाको क्षेत्रमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका इञ्जिनियर आकर्षण पोखरेल ? - Narayanionline.com Narayanionline.com को हुन गगन थापाको क्षेत्रमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका इञ्जिनियर आकर्षण पोखरेल ? - Narayanionline.com
को हुन गगन थापाको क्षेत्रमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका इञ्जिनियर आकर्षण पोखरेल ?
युवा इञ्जिनियर आकर्षण पोखरेलले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ४ मा उम्मेदवारी दिने भएका छन्। उनले ‘परिवर्तन अपरिहार्य छ, पर्खिनु विकल्प छैन’ भन्ने नारासहित प्रतिनिधिसभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। गत वैशाख ३१ मा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको सफलतासँगै काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ।